Don't be duped - ANC
He said the ruling party committed itself to positioning the province as a
leading economic hub in South Africa in years to come. ...
Harare - Zimbabwe's President Robert Mugabe has returned home from a short
holiday in the Far East, the state-controlled Herald reported on Monday.
'Astronomical' fees slammed
Harare - Journalists in Zimbabwe on Sunday criticised recent "astronomical"
accreditation fees by President Robert Mugabe's government. ...
Rivals clash as troops withdraw
Somalia's interim President Sheikh Aden Madobe said on Saturday that al
Shabaab was the biggest threat to stability in the Horn of Africa nation
Tutu fasts for Zimbabwe
We are the America of Africa in that we represent a little less than 5% of
the continent's population and produces 30% of the continent's GDP. ...
Call to help hijacked crew
Kiev - Relatives of crew members aboard a Ukrainian cargo ship that was
hijacked off Somalia are appealing to international humanitarian groups for
LRA rebels kill 22 in DRC raids
Kinshasa - Uganda's Lord's Resistance Army (LRA) rebels killed 22 people
during weekend raids in northeast Democratic Republic of Congo, a local
Posted by Marc Evan Aupiais at 5:54 PM